Jumlada Shiinaha ee Warshadaha & Waxsoosaarka goobta lagu sameeyo iyo soosaarayaasha | Huasheng
Xawaaraha isku-dhalaalaya & goob-dhajisyada
Waxyaabaha aan dareemeyno ee wax lagu beddelo & goobta lagu qurxiyo waxay ka kooban yihiin merino dhogor leh oo ay dareemayaan, taasoo ka dhigeysa inaysan ahayn wax waara oo raaxo leh, laakiin sidoo kale qurux badan.
Waxay ku habboon yihiin cabitaannada kulul iyo kuwa qabow, iyo muuqaalka fudud iyo maaddada jilicsan ayaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan gudaha goobta shaqada ama gurigaaga.
Shayga Xawaaraha isku-dhalaalaya & goob-dhajisyada
Waxyaabaha 100% merino dhogorta
Cabbirka 4x4 '', ama loo habeeyay
Midab Midabka Pantone
Qaababka Round, hexagon, labajibbaarane, iwm.
Nidaaminta hababka Goynta goynta, goynta laser.
Xulashada daabacaadda Daabacaadda daabacaadda dhijitaalka ah ee silkscreen.
Xulashada Logo Scanning Laser, silkscreen, sumad dhogor leh, maqaar wasakhaysan, iwm.
Boqolkiiba 100% dhogorta dhogorta leh ayaa sidoo kale ah il dabiici ah, oo la cusboonaysiin karo taas oo macnaheedu yahay inay ka madax bannaan tahay waxyaabaha sunta ah ee xun. Waa doorasho waarta, noolaha dhirta lagu koriyo u yeelata guri saaxiibtinimo.
[Fiican oo jilicsan]
Waxay ka kooban yihiin dhogor macaan oo jilicsan, waxyaabaha wax lagu cabbiro waa kuwo u jilicsan sagxadahaaga waxayna siiyaan meel degitaan sahlan oo koob galaaska ama koobka ah. Ma geysan doonto waxyeelo sida marbadda ama dhagaxa haddii si shil ah lagu tuuro.
[Cufan oo waara]
Dharka dhogorta leh ee loo yaqaan 'Merino dhogor' wuxuu dareemay inuu yahay mid gaar ah maadaama ay ka kooban tahay fiilo aad u wanaagsan oo jilicsan oo si adag ugu xidhan dhexda kulul iyo cadaadiska. Dareenka ka dhashay ayaa ah mid qaro weyn, cufan oo aan daadin doonin, jeexan doonin ama jebin doonin.
Koofiyadaha dharka dhogorta ah ee dhogorta leh waa xulashada NATIIJADA. Iyagu waa la cusboonaysiin karo oo la beddeli karo. Wool xitaa waxay leedahay guryaha ANTI-BACTERIAL sababtoo ah jiritaanka dabiiciga ah ee lanolin.
Nasiib wanaag dhogorta ayaa si dabiici ah u adkaysata wasakhda iyo wasakhda. Sida waxkastoo gurigaaga katirsan, waxayba ubaahantahay in la nadiifiyo mar mar. Tallaabada ugu horreysa ee wanaagsan waxay noqon doontaa in la isku dayo in lagu nadiifiyo maro qoyan. Waxa kale oo laga yaabaa in lagu maydho biyo qabow iyadoo la isticmaalayo saabuun jilicsan ka dibna loo jiifiyay si ay u qalalaan. Kuwaani waxaa laga sameeyay 100% merino dhogor ah markaa howshu waxay la mid tahay xanaaneynta dharka dhogorta tayada leh.
Wool ayaa sidoo kale si gaar ah u baabi'iya uumiga. Qoyaanku wuxuu ku dhagan yahay fiilooyinka dhoobada ah ee jikada - taasoo ka ilaalinaysa alaabtaada inay wax yeelaan (oo jikadaadu aysan ku dheganayn quraaradda).
Hore: Furux keychain
Xiga: Qolof dhalaalaya